कैलाली क्याम्पसका प्रारम्भिक दिनहरू « Anumodan National Daily
कैलाली क्याम्पसका प्रारम्भिक दिनहरू
२०३७ सालको असोज महिनामा व्यवस्थापन स्नातकोत्तर तहको अन्तिम सेमेष्टरको परीक्षाको बेला म काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित हाम्रो घरको वाथरुममा लडेर टाउकोमा चोट लागि उपचार गराइरहेको थिए । सामान्य अवस्थामा फर्कन झण्डै दुई महिना लागेको थियो । अर्को समेष्टरको परीक्षा आउँदासम्म दुई/तीन महिना के गर्ने भनेर सोची रहेको थिए । धनगढीमा क्याम्पस स्थापना भएको कुरा सुनेको थिए । त्यसै बेला क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हनु भएका चन्द्रधर उप्रेतीले मेरो दाज्यु प्रा. प्रेमराज पन्तसँग मरो बारेमा कुरा गर्नु भई मलाई धनगढी पठाई दिन अनुरोध गर्नु भएको रहेछ । कैलाली क्याम्पसमा नेपाली विषय पढाउन जान लाग्नु भएका स्व. जयराज पन्त दाइले पनि मलाई तिमीले पनि त्यहाँ जानुपर्छ भन्नु भो । चन्द्रधर उप्रेती नेपाल ल क्याम्पसको प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो । रिटायर हुन केही समय बाँकी छदै त्रिविबाट बिदा लिएर कैलाली क्याम्पसमा जानु भएको थियो । धनगढीमा नयाँ खुलेको क्याम्पसमा अरू विषय पढाउने शिक्षकको व्यवस्था भएपनि व्यवस्थापनका विषयहरू विशेष गरी लेखा विषय पढाउने शिक्षक पाइएको रहेनछ । गोरखापत्रमा विज्ञापन गर्दा पनि लेखा विषयको शिक्षकको लागि एउटा पनि दरखास्त परेको थिएन । उप्रेती सर लेखा विषय पढाउने शिक्षक खोज्न काठमाडौं आउनुभएको रहेछ । त्यसै कारणले उहाँले मसँग कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो । म काठमाडौंको कालिकास्थानमा चन्द्रधर उप्रेती सरको घरमा उहाँलाई भेट्न गए । चन्द्रधर सरलाई भेटेपछि एकाउन्ट पढाउन सक्छौं कि सक्दैनौ भनरे सोधेको मलाई अहिले पनि याद छ । उहाँले आफ्नो ठाउँमा गएर काम गर्नु पर्दछ भनि मलाई प्रेरित गर्नुभयो ।
एकछिन पछि एक जना मानिस आएर क्याम्पस प्रमुखलाई अञ्चलाधीशज्यूले बोलाउनुभएको छ भन्ने खबर ल्यायो । त्यस बेलासम्म धनगढीमा टेलिफोन आइसकेको थिएन । यस्तो खबर गर्दा कार्यालयको पियन वा कोही अन्य मान्छे पठाउने गरिन्थ्यो ।
अन्यत्रका मानिसको लागि त्यस बेला धनगढी दुर्गम जस्तै थियो । कतै जानुपरे भारतबाट भएर आवतजावत गर्नु पर्दथ्यो । नेपालबाटै आउने जाने बाटो थिएन । धनगढीबाट महेन्द्रनगर जानलाई समेत मैलानी, पिलिभित भएर जानु पर्दथ्यो । त्यो अवस्थामा अरू ठाउँका व्यक्तिहरू त्यो पनि निजी स्तरमा खुुलेको क्याम्पसमा पढाउन यहाँ आउने संभावना थिएन । मलाई भेटेपछि उप्रेती सर ठूलो तनावबाट मुक्त हुनु भएको जस्तो मलाई लाग्यो । उहाँको कुरा गराईबाट त्यस्तै देखिन्थ्यो । सबै मानिस यहाँ आउन तयार नहुने हुनाले त्यस बेलाको सञ्चालक समितिले क्याम्पसमा पढाउने पूर्णकालीन सहायक प्राध्यापकलाई त्रिविको प्रचलित स्केलमा दुर्गम भत्ता पच्चिस प्रतिशत र अर्को विशेष भत्ता पच्चिस प्रतिशत गरी पचास प्रतिशत थप तलब दिने र स्थायी भएपछि सञ्चयकोष, पेन्सन समेत दिने निर्णय गरको थियो । त्यो आकर्षण पनि उप्रेती सरले मलाई देखाउनुभयो । उहाँले मलाई पनि आफूसँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भो । २०३७ सालको पुस महिनाको मध्यतिर उप्रेती सर र म भारतको बाटो हुँदै धनगढी आयौं । त्यस बेला गौरीफन्टासम्म रेल आउँथ्यो ।
त्यस बेला कैलाली क्याम्पसको पढाई धनगढीको हसनपुरस्थित पञ्चोदय स्कूलको भवनमा हुन्थ्यो । म पहिलो पटक जाँदा पञ्चोदय स्कूल कता पर्छ भन्ने थाहा थिएन । बाटोमा अरूलाई सोधेर गएको थिए । कैलाली क्याम्पसमा २०३७ साल माघ १९ गतेबाट क्लास सुरु भएको थियो । मेरो नियुक्ति २०३७ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी दिइएको थियो । कक्षा सुरु हुनु भन्दा केही दिन अघि देखिनै हामीहरू पञ्चोदय स्कूलमा गएर कक्षा सञ्चालनको पूर्व तयारीको काममा लाग्ने गर्दथ्यौ । त्यसबेला क्याम्पसको नाम कैलाली वाणिज्य क्याम्पस थियो । कैलाली बहुमुखी क्याम्पस भन्ने नाम पछि परिवर्तन गरिएको हो । क्याम्पसको पहिलो व्याचमा आईकम पहिलो वर्षमा जम्मा १४५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । ए र बी गरी दुई सेक्सन थिए । मलाई अहिले पनि सम्झना छ २०३७ साल माघ १९ गते बिहान ७ बजे पहिलो घन्टी लागे सँगै चन्द्रधर सरले एउटा क्लासमा तिमी जाउ भने पछि म चक र डस्टर लिएर एउटा सेक्सनमा गएको थिए । विद्यार्थीहरूसँग परिचय पछि त्यस दिन लेखा प्रणाली भनेको के हो भन्ने विषयमा क्लास लिएको थिए । त्यसबेला मलाई लागेको थिएन कि २०३७ साल माघ १९ गते मैले समातेको चक र डस्टरले जीवन भर मेरो साथ छोडने छैन भनेर । पहलो दिन क्लासमा जाँदा देखेका विद्यार्थीका अनुहारहरू अहिले पनि सम्झन्छु जस्तै पुष्करनाथ ओझा, नरबहादुर चन्द, ज्ञानी मल्ल, जनक शाह, गोपाल हमाल, जानकी तुलाधर, डिल्ली जोशी, स्व.कमलापति जोशी, धर्मबहादुर सिंह आदि ।
सुरुमा स्व.जयराज पन्त, मुकेश श्रेष्ठ र म गरी जम्मा तीन जना मात्र पूर्णकालीन शिक्षक थियौ । कर्मचारीतर्फ यज्ञराज भट्ट र खगराज भट्ट थिए । पछि विस्तारै अरू शिक्षकहरू थपिएका हुन । अन्य शिक्षकहरू विभिन्न कार्यलयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू थिए । उहाँहरूलाई बिहान पार्टटाइम पढाउने गरी नियुक्ति गरिएको थियो । सुरुमा पार्टटाइम पढाउने शिक्षकहरूमा स्व. देवकान्त पन्त, सुरेन्द चन्द, करवीर शाह, खेमराज पाण्डेय, स्व. चक्रपाणि रेग्मी आदि हनुहुन्थो । पछि २०३८ सालमा सुरेन्द्र चन्द सर पहिलेको जागिर छोडेर क्याम्पसमा पूर्णकालीन शिक्षक हुनु भएको हो । त्यसपछि चेतराज ओझा, स्व. भीमराज जोशी, बिना जोशी, जयराम बर्मा, शेरसिंह रावत, सोमेन्द्र हमाल, सुशीला स्वाँर पनि पूर्णकालीन शिक्षकको रूपमा क्याम्पसमा आउनुभयो । श्री विश्वनाथ जोशी त्रिविबाट काजमा यस क्याम्पसमा आउनुभएको थियो । उहाँ पछि न्यायाधीश हुनुभयो । केही समय कैलाली क्याम्पसमा पढाए पछि जयराज पन्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा र मुकेश श्रेष्ठ कृषि विकास बंैकमा जानु’भो ।
क्याम्पसको आफ्नै भवन नभएकोले कक्षाहरू स्कूल समय भन्दा बाहिर चलाउनु पर्दथ्यो । हिउदमा बिहान र गर्मिमा दिउँसो क्लास चलाउनु पर्दथ्यो । गर्मीमा दिउसो तीन बजेबाट कक्षा सञ्चालन हुन्थे । त्यसबेला धनगढीमा विजुली भरपर्दो थिएन । कहिले काही दुई/तीन दिनसम्म पनि वत्ति हुँदैनथ्यो । पठनपाठनमा वाधा नहोस् भनेर क्याम्पसले दशवाह बोटा मट्टीतेलबाट बल्ने पेट्रोमेक्स किनेको थियो । बेलुकीका क्लासहरू अकसर गरेर पेट्रोमेक्स बालेरनै पढाउने गरिन्थ्यो । हरेक क्लासमा दुईटा पेट्रोमेक्सको व्यवस्था गरिएको थियो । एउटा पढाउने शिक्षको टेवुलमा र अर्काे क्लासको बीचमा राखिन्थ्यो । त्यसबेला भुगोल पढाउने नेपाली शिक्षक नपाएर समस्या भएको थियो । भुगोल पढाउने एक जना भारतीय जयराम बर्मा थिए । उनले भुगोलमा एमए गरेका थिए । उनी आफ्नो विषयमा निकै दक्ष थिए तर भाषाको समस्या थियो । उनी हिन्दी मात्र जान्ने, नेपाली नजान्ने त्यसैले हिन्दीमा पढाउथे तर विद्यार्थीलेहरू भने हिन्दी बुझे पनि त्यसलाई नेपालीमा लेखेर नोट बनाउन सक्दैनथे । यस कार्यलाई सहज बनाउन खेमराज पाण्डेय सरको सहायत लिइयो । त्यसबेला उहाँ त्रिनगर स्कूलको हेड माष्टर हुनुहुन्थो । उहाँले विएड भुगोल विषय लिनु भएको रहेछ । क्लासमा पढाउँदा जयराम वर्माले हिन्दीमा पढाउने र त्यहि कुरालाई खेमराज पाण्डेयले व्याख्या गरेर नेपालीमा सम्झाई दिनुहुन्थ्यो र विद्यार्थीहरू नोट बनाउथे । केही समय यसरी अनुवादक राखेर पनि पढाई गरियो । जयराम वर्माले नेपाली बेल्न सिके पछि यो समस्या रहेन उनी एक्लै पढाउन थाले । म अहिले पनि पञ्चोदय स्कूलको भूईतलाको कोठामा वेलुकी पेट्रोमेक्सको उज्यालोमा एकातिर जयराम बर्मा र अर्कोतिर खेमराज पाण्डेय सरले भुगोल पढाएको दृश्य विर्सेको छैन ।
कैलाली कयाम्पसको स्थापनामा तत्कालीन सेती अञ्चलाधीश रत्नबहादुर गरुङको प्रमुख योगदान रहेको छ । उनले नै तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्रमा जालीको २७ विगाहा सरकारी जमीन क्याम्पसकोको नाममा दर्ता गर्नको लागि हुकुमं प्रमांघी गराएका थिए । त्यसबेलाको नियमअनुसार सम्बन्धित अञ्चलको अञ्चलाधीश क्याम्पस सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्था रहदासम्म कायम थियो ।
अञ्चलाधीश गुरुङ क्याम्पसको ससाना कुरामा समेत व्यक्तिगत रुचि लिन्थे । एक पटक क्याम्पसको कक्षा सुरु हुने बेलामा पञ्चोदय स्कूलको पियन कतै गएर कक्षा कोठा खोल्न सकिएन । दिउसो तीन बजे खोल्नुपर्ने कक्षा कोठाहरूको साचो लिएर पियन बेपत्ता भएपछि कक्षा सञ्चालन हुन सकने । विद्यार्थीहरू होहल्ला गर्दै अफिसमा आए । अफिस पञ्चोदयको हाताभित्रको अर्को सानो घरमा थियो क्लासको साचो पयिनसँग मात्रै थियो अर्को साचो थिएन । अबदेखि यस्तो कुरा नदोहरिने भनि विद्यार्थीहरूलाई सम्झाएर पठायौ । पियनले समयमा कोठा नखोलेको कारणले क्याम्पसको कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको कुरा अञ्चलाधीश गुरुङ कहाँ पनि पुगेको रहेछ । एकछिन पछि एक जना मानिस आएर क्याम्पस प्रमुखलाई अञ्चलाधीशज्यूले बोलाउनु भएको छ भन्ने खबर ल्यायो । त्यस बेलासम्म धनगढीमा टेलिफोन आइसकेको थिएन । यस्तो खबर गर्दा कार्यालयको पियन वा कोही अन्य मान्छे पठाउने गरिन्थ्यो । त्यसबेला क्याम्पस प्रमुख चन्द्रधर उप्रेती मलाई निमित्त दिएर व्यक्तिगत कामले भारत तिर जानु भएको थियो । म अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएर त्यस दिन भएको घटनाको जानकारी दिए । सबै कुरा सुनेपछि अञ्चलाधीश गुरुङले पञ्चोदयको हेड सर शीवरत्न उपाध्यायलाई पनि बोलाउन पठाउनुभयो । केही बेरमा शिवरत्न सर पनि आइपुग्नु’भो । अञ्चलाधीश गुरुङले स्कूलको पियन समयमा नआएर विद्यार्थीको पढाई रोकिने घटना भविष्यमा दोहरिनु हुँदैन भन्नुभयो । साथै उहाँले एउटा नयाँ ताल्चा किन्ने, त्यसको तीन साचोमध्ये एउटा क्याम्पस प्रमुख सित अर्को हेड सर सित र तस्रो साचो पियनसँग रहने व्यवस्था गर्न भन्नुभयो । यसो भएको खण्डमा पठनपाठनमा वाधा पर्देन भन्नुभयो । साथै उहाँले पञ्चोदयको पियनलाई प्रोत्साहन स्वरूप क्याम्पसले मासिक केही रकम दिने व्यवस्था गर्न पनि भन्नु’भो । यस्ता ससाना कुरामा पनि अञ्चलाधीशले चासो राख्दथे ।
जुनबेला कैलाली क्याम्पस स्थापना भयो त्यो बेला देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । बहुदलीय व्यवस्था आउन अझै नौ वर्ष बाँकी थियो । पञ्चायत बाहेक अरू राजनीतिक गतिविधि नगन्य थियो । काँग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए र कुनै पनि राजीनितक गतिविधि गर्न वन्देज लगाइएको थियो । पार्टीका नेताहरू जसलाई त्यस बेला ईतर पक्ष भनिन्थो यात निर्वासित भएर भारतमा बसेका थिए या जेलमा या देशभित्रै भूमिगत भएका हुन्थे । क्याम्पसमा केही राजनीतिक गतिविधि हुन्छ कि भनेर स्थानीय प्रशासन सधै चनाखो हुन्थ्यो । त्यस बेला क्लास क्लास समेत प्रशासनका सुराकीहरू हुन्थे । कुन शिक्षकले के गर्छ, को सँग उठवस गर्छ, कस्तो पढाउँछ, के पढाउँछ भन्ने कुरा पनि सिडिओ, अञ्चलाधीश कहाँ पुग्थ्यो । क्याम्पसका ससाना कुराहरू पनि प्रशासन कहाँ पुग्थे । पञ्चायती व्यवस्था समर्थक विद्यार्थीहरूको बोल वाला थियो । उनीहरूको सिडिओ अञ्चलाधीशसम्म पहुँच हुन्थ्यो । नेविसंघ र अनेरास्ववियु प्रतिवन्धित पार्टीहरूका भातृ संगठन थिए । यी विद्यार्थी संगठनका अधिकांस क्रियाकलापहरू भूमिगत रूपमानै सञ्चालन हुने गर्दथे । राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल पञ्चायत समर्थक विद्यार्थीहरूको संगठन थियो । क्याम्पसको विकासका अन्य कार्यहरूमा राष्ट्रवादी विद्यार्थीहरूको पनि उल्लेखनीय योगदान रहेको थियो ।
क्याम्पस स्थापना भएपछि कैलाली क्याम्पसमा नेपाल प्राध्यापक संघको ईकाई स्थापना गर्ने कुरा हामीले उठायौं । अञ्चलाधीशले क्याम्पस प्रमुख उप्रेती सरलाई बोलाएर क्याम्पसमा प्राध्यापक संघको आवश्यकता छैन बरु कर्मचारी मिलन केन्द्रको सदस्य वन्न भन्नु पर्‍यो भनेर दवाव दिएर पठाएका रहेछन् । त्यस बेलाको कर्मचारी मिलन केन्द्र भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुन्थ्यो । सबै सरकारी कार्यालयका र संस्थानका कर्मचारीहरू त्यसका सदस्य हुन्थे । त्यो संस्था पूर्णरूपले सिडिओको नियन्त्रणमा थियो । परोक्ष रूपमा पञ्चायती व्यवस्थालाई सहयोग पुर्‍याउनु कर्मचारी मिलन केन्द्रको उद्देश्य थियो । हामीले कर्मचारी मिलन केन्द्रको सदस्य हुन चाहेका थिएनौं । क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको प्राध्यापक संघ हुन्छ, हामी कर्मचारी होईनौ त्यसैले कर्मचारी मिलन केन्द्रको सदस्य हुँदैनौ भनेर अञ्चलाधीश समक्ष अडान लियौ । हामीहरूलाई कर्मचारी मिलन केन्द्रको सदस्य बनाई क्याम्पसमा प्राध्यापक संघ गठन हुन नदिन पञ्चायत समर्थक धनगढीका त्यसबेलाका केही गण्य माण्य व्यक्तिहरूलाई समेत प्रशासनले परिचालन गरेको थियो । त्यसवेला नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए पनि केही पेशागत संगठन खोल्न पाइन्थ्यो । नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल वार एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जस्ता पेसागत संगठनहरू पञ्चायत विरोधी संस्थाको रूपमा चिनिन्थे । ती संगठनहरूमा पञ्चायत व्यवस्था विरोधी फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरू नेतृत्व तहमा चुनिने गर्दथे । जस्तै नेपाल प्राध्यापक संघमा २०३७ सालमा प्रजातान्त्रिक पक्षधर प्रा. विसि मल्ल अध्यक्ष चुनिनु भएको थियो भने त्यस पछि प्रगतिशील पक्षधर प्रा. मंगलसिद्घी मानन्धर निर्वाचित हुनु भएको थियो । यसै कारणले सकेसम्म केलाली क्याम्पसमा नेपाल प्राध्यापक संघको ईकाई खोल्न नदिने प्रशासनको प्रयास थियो । क्याम्पसका शिक्षकहरूको लामो प्रयास पछि र नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय तहको दवावले गर्दा २०३८ सालमा स्व. जयराज पन्तको सभापतित्वमा नेपाल प्राध्यापक संघ कैलाली क्याम्पस ईकाईको गठन भएको थियो ।
२०३८ सालमा राजा बीरेन्द्रको दिपायलमा भ्रमण मुकाम थियो । राजाले हुकुमं प्रमांगी गरी दिएको धनगढी वजार नजिकैको जालीको जंगलमा रहेको क्याम्पसको प्रस्तावित निर्माण स्थलमा पनि राजाको सवारी हुने कार्यक्रम छ भन्ने कुरा क्याम्पसका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई सुनाइयो । सवारीको एक दिन अगाडि अञ्चलाधीशले क्याम्पसका सबै शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर भोलि राजाको धनगढीमा सवारी छ तपाईहरू सबैले सके दौरासुरुवाल नभए नेपाली टोपी लगाएर सरकारको स्वागतको लाइनमा वस्नु पर्छ भन्ने उर्दि जारी गरे । टोपी लाएर आउने कुरामा विद्यार्थीहरूले असहमति जनाए । अञ्चलाधीशले टोपी किनिदिनु पऱ्यो हामी आफ्नै पैसाले टोपी किन्न सक्दैनौ भन्ने कुरा गरे । त्यस पछि अञ्चलाधीशले प्रजिअलाई सबै विद्यार्थीहरूलाई एक/एक वटा भादगाउँले टोपी किनि दिने लिखित आदेश दिए । केही छिनपछि सबै विद्यार्थीहरूलाई बजारबाट टोपी किनेर दिइयो ।
त्यसको भोलि पल्ट राजाको सवारी हुने दिनको मुख्य कार्यक्रम धनगढीको खुला मञ्चमा थियो । तर, क्याम्पसका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई भने बिहानैदेखि हालको क्याम्पस रहेको स्थान जुन त्यस बेला पुरै जंगल थियो त्यहि गएर राजाको सवारीको प्रतीक्षा गर्न भनियो । चन्द्रधर उप्रेती सर चाहि खुला मञ्चमै हुनु हुन्थो र राजाको सवारीसँगै क्याम्पस आउने कुरा थियो । हामीहरू दिन भरि भोक भोकै राजा आउँछन् भनेर कुरेर वस्यौ तर दिउँसो ४ बजेसम्म पनि राजाको सवारी भएन । त्यसै बेला राजको हेलिकोप्टर खुला मञ्चको कार्यक्रम सकेर क्याम्पस माथि बाट उडेर गयो । भादगाउँले टोपी लगाएर दिन भरि राजा आउछन् भनेर कुरेर बसेका विद्यार्थीहरूको धैर्यको बाँध फुट्यो र उनीहरू रिसाएर नारा लगाउँदै अञ्चलाधीश अफसिमा पुगेर कार्यालयको गेटमै सबैले टोपी फालेर पञ्चायती व्यवस्था मुर्दावाट, विद्यार्थीलाई राजासँग भेट गर्न नदिने स्थानीय प्रशासन मुर्दावाद भन्ने नारा लाउँदै बजारतिर गए । त्यसबेला क्याम्पस स्ववियुका सभापति धर्मबहादुर सिंह थिए । उनलेनै प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए । विद्यार्थीहरूले जुलुस, नारावाजी गर्नु अहिले सामान्य लाग्न सक्छ तर पञ्चायत कालमा त्यो ठूलो घटना थियो । वास्तवमा जालीको जंगलमा राजाको सवारी हुन्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई विहानैदेखि त्यहाँ पठाउनु स्थानीय प्रसासनको विद्यार्थीहरूलाई राजाको नजिक पुग्न नदिने र खुला मञ्चबाट टाढा राख्ने चाल थियो । खुला मञ्चमा यदि कुनै विद्यार्थीले पञ्चायत व्यवस्था विरोधी नारा लगाएको खण्डमा या अन्य कुनै अवाञ्छित गतिविधि गरेको खण्डमा प्रशासनलाई ठूलो समस्या पर्न सक्थ्यो । जागिर समेत जान सक्थ्यो । त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई पन्छाउने त्यो एउटा सुनियोजित चाल थियो भन्ने कुरामा कुनै संका रहेन ।
क्याम्पसमा शिक्षकको माग गर्दा विज्ञापनमा सञ्चयकोषको व्यवस्था गरिने छ भनिए पनि हामीहरूलाई सञ्चयकोषको सुविधा मिलेको थिएन । हामीले पटकपटक अञ्चलाधीशलाई अनुरोध गर्दा पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएन । त्यसै बेला हामी सात आठ जना स्थायी शिक्षकहरूले आपसमा सल्लाह गरी सञ्चयकोषको सुविधा दिने निर्णय नभएसम्म दाह्री पाल्ने एक प्रकारको आपसी सहमती गरेका थियौ । क्याम्पसका सबै शिक्षकहरू दाह्री पालेका थिए । क्याम्पस प्रमुख उप्रेती सरलेले पटकपटक हामीहरूलाई दाह्री काटेर मात्र क्याम्पसमा आउन भन्नुभयो तर हामीले दाह्री काटेनौ । विस्तारै यो कुरा अञ्चलाधीश कहाँसम्म पुगेछ । अञ्चलाधीश कहाँ कुरा लाउनेले क्याम्पसका सबै शिक्षकले दाह्री पालेका छन् तिनीहरू सबै कम्युनिष्ट रहेछन्, पञ्चायत विरोधी हुन, तिनीहरूलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ भनेर कुरा लाएछ । त्यसबेला दाह्री पाल्नेहरू कम्यनिष्ट हुन्छन् भन्ने भनाई पनि प्रचलित थियो । त्यसैबेला धनगढीमा राज परिवारको सदस्य सायद रेडक्रसको अध्यक्ष हेलेन शाह आउने कुरा थियो । हामीहरू सबै जना उहाँलाई भेट्ने र आफ्नो कुरा भन्ने उपाय खोजी रहेका थियौ । त्यसपछि अञ्चलाधीशलाई यिनीहरूले सरकारमा जाहेर गर्न सक्छन् भन्ने लागेर होला उनले एयरपोर्टबाटै क्याम्पस प्रमुख उप्रेती सरलाई चिठ्ठी लेखेर म भोलि पर्सिनै सञ्चालक समितिको बैठक राखेर सञ्चयकोष सम्बन्धि निर्णय गराउँछु सरहरूलाई जनकारी गराई दिनु भनेर लेखेका रहेछन् । यस्तो खबर पाएपछि हामीहरूले दाह्री काटेका थियौ । त्यसपछि प्रचलित नियमानुसार सञ्चयकोष कट्टी हुन थालेको हो ।
त्यसबेलाको पञ्चायती व्यवस्था काँग्रेस र कम्यनिष्टहरू प्रति एकदमै अनुदार थियो । त्यस सम्बन्धि कुनै पनि क्रियाकलाप क्याम्पसमा नहोस भन्ने स्थानीय प्रशासनको प्रयास रहेको हुन्थ्यो । २०३९ सालमा विपि कोईरालाको निधन भयो । त्यस बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनमा शोक बिदा दिने नियम थियो तर विपिको निधनमा बिदा दिइएन । विपिको निधन भएको दिन क्याम्पसका विद्यार्थीहरू र प्राध्यापकहरूले सोक सभा गर्ने तयारी गरे तर अञ्चलाधीश कार्यालयवाट क्याम्पसभित्र शोक सभा गर्न नपाइने, गरेको खण्डमा पक्राउ गर्ने चेतावनी सहितको जानकारी क्याम्पस प्रमुखलाई पठाइयो । बिहानैदेखि कुनै पनि क्लास भएको थिएन । नेविसंघ र अनेरास्ववियूका विद्ययार्थीहरू पढाई गर्नु हुँदैन शोक सभा गर्नुपर्दछ भन्दै थिए भने राष्ट्रवादी मण्डलका विद्यार्थीहरू जसरी भए पनि क्लास हुन पर्छ भनेर दवाव दिँदै थिए । तर शोक सभा गर्नु संभव थिएन तुरुन्तै पक्राउपर्ने संभावना थियो । त्यसपछि शोक सभा गर्ने एउटा जुक्ति निकालियो । यो शोक सभा नेता विपिको भन्दा पनि साहित्यकार विपिको स्मृतिमा हुने भनेर भनियो । साहित्यकार विपिको शोक सभामा कसैको पनि आपत्ति गर्नु हुँदैन भने पछि शोक सभा सम्पन्न भयो ।
क्याम्पस स्थापनाको सुरुका दिनहरूमा जसरी भए पनि क्याम्पसलाई सफल पार्नु पर्दछ भन्ने सोच सवैमा थियो । अञ्चलाधीशको अगुवाईमा भएको क्याम्पस स्थापनाको कार्यमा सबैको सहयोग रहेको थियो । उद्योगपति तोलाराम दुग्गड क्याम्पसको पहिलो कोषाध्यक्ष थिए । डा. शिवदत्त जोशी सह–कोषध्यक्ष थिए । पञ्चायत समर्थक र पञ्चायत विरोधी दुवै पक्ष क्याम्पस बनाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा एकमत थिए । २०३७ सालमा गठन भएको पहिलो सञ्चालक समितिमा सबै पक्षलाई समेटने आसयले त्यसबेलाको प्रतिबन्धित नेपाली काँग्रेस समर्थक स्व. टेकबहादुर चोखाललाई पनि सदस्य बनाइएको थियो जबकी त्यसबेला पञ्चायत विरोधीलाई अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिमा राख्नु भनेको अपवाद नै मान्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा एक पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा अञ्चलाधीश रत्नबहादुर गुरुङले भनेको कुरा स्मरण हुन्छ गुरुङले भनेका थिए चोखाल जी म पञ्चायत व्यवस्थाको अञ्चलाधीश हुँ तपाईहरू भनेको पञ्चायत विरोधी हो र तपाईको पार्टी नेपालमा प्रतिबन्धित छ तर क्याम्पस बनाउने कार्यमा तपाई हामी सबै एक जुट हुनुपर्दछ । यस कार्यमा हामीले राजनीतिक मतभेद विर्सनु पर्दछ । पञ्चायत कालको सर्वाधिकार सम्पन्न अञ्चलाधीशले पञ्चायत व्यवस्था विरोधिलाई यस्तो कुरा भन्नु र सहकार्य गर्ने सामान्य कुरा थिएन । त्यसबेलाको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा मोहनराज मल्ल पनि सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुहुन्थो । पछि सञ्चालक समितिमा लोकेन्द्रबहादुर शाह र ललितजंग स्वाँर, पनि सदस्य हुनुभयो ।
यसमा क्याम्पस स्थापनाको पहिलो दुई वर्ष २०३९ सालसम्मको संस्मरण समावेस गरिएको छ ।
(साभार : कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संघको मुखपत्र सेतीको सुसेलीबाट)
माघ १३ गते (epaper)